कमरेड रामवृक्ष यादव नेपालको माओवादी आन्दोलनको एक जना अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो । २०५१ साल भदौ २ गते धनुषाको बर्मझियामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारका गुन्डाहरूद्वारा वहाँको हत्या भएको थियो । वहाँ राजनीतिक र साहित्यिक-सांस्कृतिक दुवै क्षेत्रमा जुझारु नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । कमरेड रामवृक्षप्रति क्रान्तिकारी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै वहाँका बारेमा विभिन्न राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नेताहरूले व्यक्त गरेका धारणाहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. कमरेड भक्तबहादुर श्रेष्ठ : महासचिव, सल्लाहकार परिषद्, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
कमरेड रामवृक्ष जननेता मात्र हुनुहुन्थेन, वहाँ जनताका क्रान्तिकारी कवि पनि हुनुहुन्थ्यो । वहाँले रचेका गीत, कविता त्यहाँका जनताका मुखमुखमा झुन्डिएको पाएको छु । वहाँ क्रान्तिकारी गीत रच्ने र त्यसलाई हार्मोनियममा आफैँ गाउने गायक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँका गीत र कविताहरू कोरा मनोरञ्जन दिने खालका नभएर जनतालाई बाटो देखाउने र चिसो रगतलाई तताएर क्रान्तिको बलिवेदीमा होमिन जगाउने जोसपूर्ण भावका हुन्थे । यस हिसाबले वहाँ बहुप्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो । निम्न वर्गको सदस्य भएकाले वहाँलाई जहिले पनि आर्थिक कठिनाइले गाँजेको हुन्थ्यो, तर यसले वहाँमा कहिल्यै पनि निराशा जगाएको पाइँन । आफ्नो पारिवारिक कठिनाइलाई वहाँले समस्याको रूपमा लिनु भएन । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो : “यस्तो कठिनाइ हाम्रो देशका जनताको आम रोग नै हो र यसबाट भाग्न थालियो भने देशलाई यो रोगबाट मुक्त पार्न सकिँदैन ।”
कठिनाइहरूलाई हाँसीहाँसी झेलेर पनि वहाँ हमेशा क्रान्तिको लागि अघि बढाउनुभयो । वहाँ संशोधनवाद, नवसंशोधनवाद र विसर्जनवादीहरूबाट क्रान्तिकारी दिशामा धक्का परेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । वहाँमा अलिकति पनि विचलित हुने मानसिकता देखिएन, सदैव क्रान्तिकारी आशावादका साथ क्रान्तिलाई हेर्नुहुन्थ्यो । एउटा सर्वहारा वर्गीय नेतामा हुनुपर्ने गुण वहाँमा मौजुद थिए । दृढ विचार, प्रतिबद्धता, जनसम्बन्ध र जनपरिचालन वहाँका विशेषता थिए । उहाँमा निडरपन, साहस र धैर्य पनि त्यत्तिकै मात्रामा थियो भन्ने कुरा धनुषा जिल्लामा भएका वर्गसङघर्षका घटनाहरूले साबित गरेका छन् ।
...हाम्रा कयौँ कम्युनिस्ट नेताहरूले लोभलालचमा फसेर र कठिनाइबाट भागेर प्रतिक्रियावादी वर्गका सामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मीठो खान र राम्रो लाउन सुखसुविधाको जीवन भोग्नका लागि देश बेच्न पनि उनीहरू तम्सिने गरेका छन् । तर कमरेड रामवृक्षले प्रतिक्रियावादी वर्गको दमन र लोभलालचामा फसेर आत्मसमर्पण गर्नु भएन । वहाँ उनीहरूको धाकधम्कीसित कहिल्यै झुक्नु भएन, हमेशा शिर ठाडो पारेर सहादत प्राप्त गर्नुभयो ।
‘मेरो सम्झनामा कमरेड रामवृक्ष यादव’ , भक्तबहादुर श्रेष्ठका सङ्कलित रचना, भाग २
२.कमरेड किरण : अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)
कमरेड यादब बाहिरभित्र दुवै ठाउँमा देखिने तमाम षड्यन्त्र, छलछाम, पाखण्ड र अन्यायका विरुद्ध जिन्दगीभर लडिरहनुभयो । वहाँ दृढता र साहसका धनी हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहँदा पार्टीका निर्णय र भावनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने काममा वहाँ सदैव दृढ रहनुहुन्थ्यो । वहाँ तलका सामान्य विवाद र झगडामा कहिल्यै फस्नु हुन्नथ्यो । वहाँले हरेक चिजलाई माथिबाट हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो । वहाँ मृदुभाषी, प्रस्ट वक्ता, सरल र गम्भीर प्रकृतिको हुनुहुन्थ्यो । जनताको बीचमा जाने र भिज्ने काममा वहाँ निकै कुशल हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले वहाँ जनमानसमा ‘मास्टर साहेब’ को नामले सुपरिचित एक लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित हुनपुग्नुभएको थियो । वहाँको व्यक्तित्वका धेरै पाटा छन् । देश, जनता र क्रान्तिका निमित्त समर्पित एक वीर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट योद्धा हुनु नै वहाँको व्यक्तित्वको अमर पाटो हो ।
...नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक प्रभावशाली नेता तथा महान् वीर योद्धा कमरेड रामावृक्ष यादवको सङ्घर्षमय जीवन र गौरवमय व्यक्तित्वबाट हामीले सिक्नुपर्ने अमूल्य शिक्षाहरू धेरै छन् । तीमध्ये त्याग, वीरता र बलिदानी भावको उदात्त शिक्षा नै हाम्रा लागि एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षा हो ।
‘कमरेड रामवृक्ष यादव–'न्यानो लाल सलाम’, उत्सर्ग
३. सिपी गजुरेल ‘गौरव’: अध्यक्ष, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा
मास्टरसाहब जे लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्थ्यो । जे भन्नुहुन्थ्यो, त्यो गरेर देखाउनुहुन्थ्यो । वहाँले साँच्चै नै सङ्घर्षलाई जीवन ठान्नुभयो र सङ्घर्षमा लागिरहनु भयो । वहाँले आफ्नो ज्वाईँलाई देशको लागि बलिदान होऊ भनेर सिकाउनुभयो । स्वयंले देशका लागि बलिदान गर्नुभयो । साँच्चै नै वहाँ दबिएर कहिल्यै बस्नु भएन । गरिबी, दुख, कष्ट र यातनालाई वहाँले हाँसीहाँसी सहनुभयो, तर दुस्मनसँग घुँडा टेक्नु भएन । उत्सर्गको समयलाई वहाँले महान् ठान्नुहुन्थ्यो, आफ्नो जीवन नै उत्सर्ग गर्नुभयो । त्यसकारण मेरो दृष्टिमा वहाँ महान् हुनुहुन्छ ।
...रामवृक्ष यादब एकजना लोकप्रिय राजनेता र लोकप्रिय साहित्यकार-कलाकार दुवै हुनुहुन्थ्यो । वहाँको देहावसानबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । वहााको रगत जसरी नेपाली धरतीमा पोखिएको छ, साँच्चै नै त्यो रक्तबीज बन्नेछ र वहाँको रगतका हरेक थोपाबाट बन्दुक समात्ने योद्धा मात्र पैदा हुने छैनन्, कलम समात्ने योद्धाहरू पनि पैदा हुनेछन् ।
‘साहित्यिक आलोकमा रामवृक्ष यादव’, उत्सर्ग
४. ईश्वरीप्रसाद दाहाल ‘असारे’ : अध्यक्ष, सल्लाहकार समिति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफू एकजना लागेर आफ्ना परिवारलाई सुरक्षित राख्ने अवसरवादका विरुद्ध तन, मन र धन सबै हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने कमरेड रामवृक्ष यादवले हामी सबैलाई बलिदान र समर्पणको बाटो देखाउनुभएको छ ।
..उहाँको हत्यापछि मधेसमा सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्न सक्ने मधेसी नेताको अभाव खट्केको छ । हामी कम्युनिस्टहरूले बितेको कुनै कुरालाई लिएर चिन्ता गर्ने भन्दा पनि संसारलाई बदल्न अग्रसर कमरेडहरूको शिक्षालाई शिरोपर गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदल्न सक्नुपर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि महान् जनयुद्ध आरम्भ गर्नुभन्दा १ वर्षअगाडि भएको कमरेड रामवृक्ष यादवको सहादतले हाम्रो जनयुद्धलाई अगाडि बढाउन प्रेरणाको काम गरेको थियो । मानिस जन्मेपछि मर्नु स्वाभाविकै हो । महान् मृत्युको जति प्रचार गरे पनि कमै हुन्छ । क्रान्तिकारीहरूको महान् बलिदानले आन्दोलनलाई बल पुग्छ । कमरेड रामवृक्ष यादव हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिल्यै नमर्ने नाम हो ।
'मेरो आँखामा रामवृक्ष यादव', सङ्घर्षका पाइला
५.डा. ऋषिराज बराल : संयोजक , क्रान्तिकारी बौद्धिक-सांस्कृतिक मञ्च, नेपाल
हामी सबैलाई थाहा छ, कमरेड रामवृक्ष यादव शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । सबैको प्यारो ‘माडसाब’ हुनुहुन्थ्यो । गाउँलेको आँखा हनुहुन्थ्यो । पथप्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो । एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो । वहाँ असल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । वहाँ एउटा राम्रो कवि, गीतकार र साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को कुशल नेता हुनुहुन्थ्यो । वहाँमा दुस्मनप्रति तीव्र घृणा थियो र वर्गआफन्तप्रति, मधेशका उत्पीडित जनताप्रति माया, श्रद्धा र मुक्तिबोधको अथाह चेतना र भावना थियो ।
...वास्तवमा रामवृक्ष यादव तराईको मात्र नेता नभएर सिङ्गो मुलुकको नेता हुनुहुन्छ । वहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका नेता हुनुहुन्छ । वहाँको मातृ भाषा मैथिली थियो, तर वहाँ विश्वसर्वहारा वर्गका गायक हुनुहुन्छ ।
‘मास्टरसाहब, लाल मधेश र लाल साहित्य’, प्रियजनहरूको सम्झनामा
६. रोशन जनकपुरी : वरिष्ठ मार्क्सवादी लेखक तथा चिन्तक
कमरेड रामवृक्षको जीवन र वहाँको पारिवारिक जीवनसमेत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निष्ठा, समर्पण र उदात्त भावको महान् कीर्तिमानको रूपमा स्थापित छ । जीवनभरि अभाव र विपन्नतासित जुधिरहे पनि क्रान्तिपथबाट वहाँ कहिल्यै विचलित हुनु भएन । अभाव, भूमिगत जीवन र कारागार जीवनका बीच पनि वहाँले आफ्ना परिवारजनलाई देश र जनताप्रति समर्पित हुन र क्रान्तिपथमा अविचल रहन प्रेरणा प्रदान गरिरहनुभयो ।
...समग्रमा कमरेड रामवृक्ष यादव वर्गसङ्घर्षको भट्टीबाट जन्मेको जनताको यस्तो सिर्जनाकार हुनुहुन्थ्यो,जसले जनताकै लागि लेख्नुभयो, जनताकै लागि बाँच्नुभयो र जनताकै लागि सहादत प्राप्त गर्नुभयो । आफ्ना क्रान्तिकर्मले गर्दा मास्टरसाहब इतिहासमा अमर भइसक्नुभएको छ ।
‘कमरेड रामवृक्ष : एक सांस्कृतिक योद्धा’, उत्सर्ग